musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Ungaimise sei vhidhiyo kubhidha dambudziko?
Pfupiso: Vazhinji vedu tinoshandisa mafoni edu uye mabhurawuza epa laptop kuitira basa pamwe nezvinangwa zvevaraidzo. Kana zvasvika pakuvaraidzwa, kuona mabhaisikopo, YouTube mavhidhiyo, uye kurodha vhidhiyo nyaya uye reels pane anozivikanwa magariro mapuratifomu ndiko kwedu-kusarudza. Asi wakambo sangana here nevhidhiyo yekukonzeresa nyaya kana uchifambisa zvemukati online? Icho hachisi icho chinhu chinogumbura zvikuru here? Zvakanaka, kwete futi! Chinyorwa ichi chinokutendera iwe mune akati wandei hacks aunogona kushandisa kugadzirisa nyore vhidhiyo kubhaiza nyaya pane chero chikuva.
Kana iwe uchiona zvirimo online nguva dzose, unofanirwa kunge wakasangana nechinotyisa vhidhiyo chiratidzo chiratidzo pane imwe nguva.
Iyo denderedzwa inogara ichitenderera pamwe ndicho chinhu chekupedzisira chaunoda kuona paunenge uri nerunyararo kuyedza kunakidzwa nebhaisikopo rine tub yemapopu mukupera kwesvondo.
Inogona kukanganisa ruzivo rwese kwauri.
Asi wakambofunga here kuti nei zvichiitika? Zvakanaka, inononoka internet kumhanya ndechimwe chikonzero chemavhidhiyo ari kutamba nemaragi, asi pangave nezvimwe zvikonzero zvinokonzeresa nyaya iyi? Uyezve, pane chero chinhu iwe chaungaite kuti uzvibvise? Joinha isu apo isu tinokuratidza maitiro ekumisa vhidhiyo kubhidha matambudziko kamwechete uye zvachose.
Chekutanga zvinhu kutanga - Nei mavhidhiyo buffer?
Paunenge uchifambisa vhidhiyo yakananga kubva pawebhu, vhidhiyo haina kuchengetwa pane yako yekuchengetera asi pane yegore server. Iyo inotorwa pasi sedhata mune chaiyo-nguva uye inoridzwa pane chako chishandiso. Chero kunonoka kana kukanganiswa mukuburitswa kunogona kukonzera kuti vhidhiyo igare kana kubatika panguva yekutamba, ichikumanikidza kuti uone chiratidzo chekukanda pachiratidziri. Maitiro aya anonzi "kubhaiza," mashandiro ekutanga kurodha mavhidhiyo muchiyeuchidzo chechiyeuchidzo.
Sezvineiwo, kurodha vhidhiyo kunofanira kuitika zvakanyatsonaka zvekuti wekupedzisira-mushandisi haawane chero glitche panguva yekutamba. Asi izvi hazviitike nguva dzese nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
Haikwanisi internet kumhanya
Ehe, inomhanyisa nyaya. Vashandi vepaInternet vanowanzoita muhondo dzakaoma, vachivimbisa vashandisi kudhawunirodha kwakanyanya-kwakawanda data nekuda kwechikonzero ichi. Kana yako internet yekubatanidza bandwidth isina kukwirira zvakakwana, iwe unowanzo shupika kubva kune vhidhiyo kubhaiza nyaya. Iwe unogona zvakare kusangana neiyi nyaya kana modem yako kana router yapera yechinyakare kana isiri kushanda nemazvo. Zvakawandisa zvishandiso zvakabatana kune imwecheteyo network panguva imwechete zvinogona zvakare kukanda iko kukanganisa.
Wakapedzisira riini kuvandudza yako router? Kunyange uchigadzirisa yako router kune yazvino vhezheni yakanaka, kushandisa yekare firmware ma routers dzimwe nguva kunobva nyaya. Tarisa uone kana maratidziro etauta yako achienderana neicho ISP yako iri kupa. Pamwe chete neizvi, ita shuwa kuti komputa yako haina kusangana nechero nyaya senge yechinyakare madhiraivha enetiweki, yakakuvara graphic kadhi dhiraivha, yakashata yewebhu browser, nezvimwe.
Kufambira mberi, ngatimbozamai kuona kugadzirisa mabhaisikopo tichishandisa mhinduro dziri nyore.
Maitiro ekumisa vhidhiyo kubhaiza
Pane mhinduro dzakawanda padambudziko rekubvisa vhidhiyo, saka zvinokurudzirwa kutanga kubva pane yakareruka manyore kugadzirisa (yakanyorwa pakutanga) wozoenderera kune inotevera kana yapfuura isingashande.
1. Tarisa yako Internet kumhanya
Kana nhengo dzakati wandei dzichishandisa iyo internet mumba mako, iwe ungango sangana neiyo yekumhanyisa kubatana, iyo inogona kutsigira yakanaka yemhando yekusefa kune akawanda madhijitari panguva imwe chete. Kuti utarise kuti ingani kumhanyisa mudziyo wako (pane iyo vhidhiyo iri kubhaiza) iri kugamuchira, fambisa yakapusa internet kumhanyisa bvunzo uchishandisa yako web browser. Kana iyo kumhanya yakadzikira pane zvaunoda, bata ISP yako kuti ive nani bandwidth chirongwa.
Kwayedza internet kumhanya
2. Buda zvirongwa zvinomhanya kumashure
Kana iwe ukatarisana ne buffering nyaya pakombuta yako, tarisa yako system mutoro uripo kubudikidza Task Manager. Kana komputa yako yakawandisa nemabasa uye ichiratidza kushandiswa kwepamusoro kwendangariro, haugone kutamba kwakanaka pamavhidhiyo akaparadzirwa. Nekuti zviwanikwa zvemakomputa zvakagarwa kumwe kunhu, hazvizofambise mavhidhiyo zvakanyatsonaka sezvazvinofanira. Kuti ukunde nyaya iyi, pfuura nepakati pechinyorwa chemaitiro uye ona iwo ari kushandisa zviwanikwa zvakawanda. Kana usiri kuzvishandisa, sarudza ivo nekudzvanya pairi kamwe, uye wobva warova iyo "End Basa" bhatani kumisa maitiro akadaro.
Vhara zviwanikwa-zvakanyanya maitiro anoshanda kumashure
3. Deredza iyo vhidhiyo mhando yauri kuona
Haisi chakavanzika chekuti vhidhiyo yepamusoro resolution yakakura muhukuru hwefaira. Ikozvino kukura kwehukuru hwevhidhiyo, iyo yakawanda nguva uye simba zvarinotora kuti riitendese kune iyo internet. Saka kuti uvandudze zvishoma chiitiko chekuona, edza kutarisa yepasi resolution resolution yevhidhiyo. Iwe unogona kuwana iyo sarudzo yekusarudza pakati peiyo resolution yevhidhiyo iwe yaunoda kutarisa paNetflix, YouTube, uye mamwe mapuratifomu.
Deredza kunaka kwevhidhiyo yauri kuona
4. Download vhidhiyo mudziyo wako
Kana pasina chimwe chinoshanda, mhinduro yakanakisa ndeyekukopa vhidhiyo kunzvimbo yako yekuchengetera. Nenzira iyi, zvirinani kana kurodha kwapera, iwe unozogona kuritarisa pasina zvinokanganisa. Iwe unogona zvakare kuyedza yakapusa uye inokurumidza kubira yekugadzira yakakura buffer nekumisa rwizi kwemaminetsi mashoma uye wozotangazve mushure.
Dhawunirodha vhidhiyo kune chako chishandiso kana kumbomira kuti ugadzire yakakura buffer
Dhaunirodha vhidhiyo asi harisi kushanda? Edza IZVI!
Kana iwe wakamboedza uye kuyedza hunyengeri hwekudhawunirodha vhidhiyo asi zvakadaro haisi kutamba mushe, faira rekutanga rakadzikwa rinogona kukuvara kana kukanganiswa. Mumamiriro ezvinhu akadaro, kuigadzirisa neyakavimbika uye inoshanda vhidhiyo yekugadzirisa chishandiso inokurudzirwa.
Mune maonero edu, Stellar Kugadzirisa Vhidhiyo ndiyo sarudzo yakanakisa mune ino mamiriro. Kurwisa mavhidhiyo akashatiswa emhando ipi neipi, software iyi ndiyo mhinduro yakanakisa kune "maitiro ekumisa vhidhiyo kubhaiza" nyaya. Chishandiso chinotevera yakapusa nhanho-nhanho nzira. Iyo inouya ine intuitive interface inoita kuti kushanda nayo ive nyore kwazvo.
Aya ndiwo maitiro aunogona kushandisa chishandiso ichi kugadzirisa vhidhiyo kubhaiza:
Tungamira kumusoro kune yepamutemo chigadzirwa peji reStellar Kugadzirisa yeVhidhiyo uye tinya pane iyo "Free Download" kubatana.
Mushure mekuburitswa kwefaira, tinya kaviri kuti ushandise.
Kana kumisikidza kwapera, tangisa Kugadziridza kweStellar yeVhidhiyo.
Mune software's interface, tinya pabhokisi rinoti "Wedzera File" kuwedzera iyo vhidhiyo faira inoda kugadziriswa. Iwe unogona kuwedzera akawanda mafaera pano.
Stellar Kugadzirisa yeVhidhiyo yekumusoro skrini (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Mushure mekuwedzera mafaera kune chishandiso, tinya pane iyo "Gadzirisa" bhatani kutanga maitiro ekugadzirisa.
Stellar Kugadzirisa kweVhidhiyo mafaera kuti agadziriswe akawedzera (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Bhari yekufambira mberi icharatidzwa kuratidza kuti yakawanda sei maitiro apera.
Stellar Kugadzirisa kweVhidhiyo kugadzirisa kufambira mberi
Mushure mokunge mavhidhiyo mafaira agadziriswa, unogona kuatarisa usati waachengeta kukomputa yako.
Stellar Kugadzirisa Vhidhiyo yekutarisa vhidhiyo usati wachengeta (https://www.stellarinfo.com/onlinehelp/en/stellar-repair-for-video-win-4/)
Mushure mekurodha vhidhiyo faira yagadziriswa, edza kuitamba. Sezvineiwo, haufanire kusangana nechero vhidhiyo yekugadzirisa nyaya izvozvi.
Vhidhiyo buffering inyaya inotambudza yega yepamhepo yezviratidziro. Asi nekutenda, ikozvino pane mushonga weiyi nyaya! Kunze kwekutarisa yako internet kumhanya uye kuvhara kumashure kumashure maapplication, kurodha pasi vhidhiyo pane yako yemuno system kunogona zvakare kuyedzwa. Kana iyo vhidhiyo yakadzingwa ikatadza kutamba, usazeze kuigadzirisa nechishandiso senge Stellar Kugadziridza yeVhidhiyo kugadzirisa vhidhiyo kubhaiza.